Buy RF Wireless Remote & LED Controller (5,000Ks) in Bahan on ipivi.com
RF Wireless Remote & LED Controller
Active on site: 50 days
Views: 395 (+1)
▶️ လူမမြင်ရတဲ့ နေရာကနေလည်း ထိန်းချုပ်ခိုင်းစေနိုင်ပါတယ် ဘာလို့ဆို RF လှိုင်းနှုန်းကို အသုံးပြုထားတာကြောင့်ပါ ... ဘယ်လောက်အကွာအဝေးထိ ရလဲဆိုရင် ၄၅ ပေလောက်အထိကို ထိန်းချုပ်ခိုင်းစေနိုင်ပါမယ် ... Frequency MHz ကို ပြောရရင်တော့ 433.92MHz ရှိပါတယ် ဗျ ...
▶️ ပုံစံ (၁၀) မျိုးထိ ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်ပြီးတော့ မီးအလင်းအရောင်းအနှေးအမြန်၊ အပြောင်းအလဲ (၁၀) မျိုးထိ လုပ်ဆောင်နိုင်မယ် ..ဘယ်လို COB မီးတန်းကိုမဆို၊ ဘယ်လို မီးဆိုင်းမျိုးကိုမဆို၊ ဘယ်လို မီးကြိုးခွေကို မဆို၊ ဘယ်လို မီးတန်းမျိုးကိုမဆို ဘယ်လို မီးပြားကိုမဆို မီးဒီဇိုင်းကို ပြောင်းလဲလို့ မရဘူး ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒါလေးသာ (၅၀၀၀) နဲ့ဝယ်ပြီး လုပ်ဆောင်လိုက်တော့ဗျား .. တစ်ခုတော့ ပြောရဦးမယ်ဗျ 12A (DC 5V ကနေ 24V) အတွင်းမှာရှိတဲ့ ဘယ်လိုမီးမျိုးကို မဆို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါမယ် ...
▶️ ပြောင်းလဲမှုမရှိ သေနေတဲ့ မီးတွေကို ရှင်အောင်၊ လှုပ်ရှားအောင် ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ ပစ္စည်းလေးပါ .. ကိုယ်ရဲ့ ဆိုင်ခန်းလေးကို အလှဆင်မလား၊ ကိုယ်ံရဲ့ ဘုရားခန်းလေးကို ပိုပြီးကြည်ညိုဖို့ကောင်းအောင် လုပ်မလား၊ ကိုယ့်ရဲ့ဧည့်ခန်းလေးကိုပဲ ပြင်ဆင်မလား၊ ကိုယ်စီးနင်းအသုံးပြုနေ့တဲ့ ဆိုင်ကယ်တို့၊ ကားတို့ကိုပဲ အလန်းဖြစ်သွားအောင် အလှဆင်မလား???
90 & family japan domestic
ရေပူရေအေး water cooler
mini aircooler လေအေးပေးစက်
Name: RF Wireless Remote &amp; LED Controller
Active on site 50 days